Korea: Fifanenàn’ny Fombam-Pivavahana Tao Anaty Fiarandalamby Ambanin’ny Tany (Metro) · Global Voices teny Malagasy
Korea: Fifanenàn'ny Fombam-Pivavahana Tao Anaty Fiarandalamby Ambanin'ny Tany (Metro)
Voadika ny 15 Marsa 2018 7:13 GMT
Vakio amin'ny teny Deutsch, Español, русский, English
Mandrakariva dia fomba fijery maro no ateraky ny resaka fombam-pivavahana eo amin'ireo mpisera amin'ny aterineto. Tao amin'ny tranonkala Korean iray, nahasarika ny saina ny zavatra niainan'ny mpisera iray tamin'ny herinandro teo.
Nitingitingina aho tao anatin'ny fiarandalamby androany. Angamba misy olona izay mamaky ity niaraka tamiko tao. Tsy nisy eritreritra na inona na inona, niakatra tao anaty fiarandalamby aho. Moanina (Mpitondra fivavahana ) bodista izay tahaka ny hitantsika amin'ny sarimihetsika haiady no mipetraka eo ambony seza. Miaraka amin'ny volomasony matevina, fotsy ary ny fanjopiakan'ny masony, dia manana hery hafa izay tsy azon'iza n'iza atonina mora foana izy. Nibanjina azy aho, voahodidin'ny voninahitra. Angamba nahatsapa izany ireo olon-kafa izay nanatrika teo…
Tamin'izay fotoana izay, nisy vehivavy lazondazony niakatra teo amin'ny fijanonana manaraka. Raha vao niainga ilay fiarandalamby, dia tsapako fa tsy vehivavy tsotra izy. Fitopy maso tsy mahazatra sy tsy manam-paharoa, ary molotra toa mitahiry tsiambaratelo. Raha vao nisokatra ny vavany, dia nirohotra nankao aorinany daholo ny olona. Araka ny fantatrareo, misy olona any anaty fiarandalamby any miteny amintsika mba hino an'Andriamanitra, raha tsy izany dia lasa any amin'ny helo isika. Izy no iray manana io fanahy io. Mpandaha-teny tsara izy, ary mamoaka ao anatin'ny 30 segondra ny votoatinà pejy efatra amin'ny A4.
Tao anatin'ny fotoana fohy naha-tao anatin'ilay fiarandalamby azy, ireo mpandeha izay voadonan'ny heriny dia nijery azy ary nanodina ny masony ho any amin'ilay moanina. Nahoana ? Na izany na tsy izany, toy ny hoe tsapan'ilay moanina sy ilay ranenitoa ny masonay, tampoka teo, nanatona ilay moanina i ranenitoa. Taorian'ny fisentoana lalina, dia nanomboka toriteny lava teo anoloan'ilay moanina izy (nenitoa), niainga tamin'ny hoe tsy misy hajany ny olona izay tsy mino an'Andriamanitra ka hatramin'ny hoe misy ampahany iray ao amin'ny helo izay voatokana ho an'ny moanina. Mazava be fa nisy pitik'afo goavana teo amin'izy ireo.
Tsy tanty intsony, nanomboka nihomehy ny mpandeha maro. Tsy vitako ny tsy nihomehy, nefa nahaliana ahy ny hahafantatra izay ho fihetsik'ilay moanina. Angamba nihevitra koa izy fa tsy tokony hangina ka nanomboka nihomehy. Hahahaa, tahaka izany. Fa niova ho tahaka ny any amin'ny sarimihetsika haiady ny zava-niseho, nihamafy ny feony ary natanjaka. Oaooo… tamin'io fotoana io, nihomehy tahaka ny varatra izy, ampy hampandosirana na iza na iza mpilalao haiady.
Nihemotra kely ranenitoa, fa tsy lefy ny heriny. Natrehany ny zava-tsarotra, nanomboka niteny ny momba ny helo indray izy. Nanohy nihomehy ilay moana. Tsy nisy nilefitra izy roa. Lasa ny fotoana, tena nampalahelo ahy ilay moanina. Efa zatra ady izy (ranenitoa) ary manana traikefa betsaka ary ilay moanina dia iray amin'ireo mpandinika lavitra ny amin'ny tontolo moderina. Nihoatra lavitra an'ilay moanina ny fanafihan-dranenitoa. Taorian'ny fijanonana maro, nitsangana teo amin'ny sezany ilay moanina mba hiala teo amin'ny toerana izay heveriko hialàna… Angamba tsy afa-po tamin'ny fanafihany na te-hahatsapa fandresena ranenitoa dia tsy nitsahatra nitory teny tamin'ilay moanina. Niala ilay fiarandalamby tao anatin'ny toritenin-dranenitoa izaho sy ilay moanina. Fa tsy tàna fa nihomehy izaho sy ireo mpandeha niala taorian'ilay moanina. Rehefa tafidina ny fiarandalamby dia niteny ilay moanina fa ” Be resaka be ilay ikalavavy “